काइल कसरी आंसिक समय काम गरेर करोडपती बने ? – GoodnewsKhabar
काइल कसरी आंसिक समय काम गरेर करोडपती बने ?
गुडन्यूज खबर । २०७७ भाद्र २, मंगलवार ०९:४४
काइल डेनिस स्नातकका विद्यार्थी हुन् । जसले थोरै समय निकालेर क्यालिफोर्नियाको रियल इस्टेट अफिसमा गर्थे । उनले $ १५ हजार डलर लगानी गर्ने निर्णय गरे । यसरी लगानी गर्नु उनका लागि ठूलो चुनौ थियो । उनले सो डलर लगानी गर्दा उनले नोकरी बाट राजिनामा दिन पर्ने थियो भने काम गर्दा सजै तलब पाउन सक्थे । ठूलो जोखिम मोलेर उनले सो लगानी गरेका थिए ।
विस्तारै जुन सफल ता हात पारे त्यो विश्वास गर्न गाह्रो भयो ।
२०१२ मा, काइलले कलेज स्नातक गरे र उनका अगाडि कुनै अवसर नभएको जस्तो थियो । केवल केही अप्राकृतिक रोजगार अवसरहरू मात्र थिए। उनले आफ्नी आमालाई घर जग्गा कार्यालयमा जागिर दिन आग्रह गरे, तर त्यो नोकरी बाट प्राप्त गरेको तलबले सबै खाचो पूरा गर्न सक्दैन भन्ने कुरा उनको मनमा खिलिरहेको थियो ।
उनले आफै आफू पागल भएको महसुस गरिरहेका थिए ।नोकरीले उनलाई सन्तुष्टि दिन सक्दैन भन्दै आफुलाइ पागल जस्तो महसुस गरिरहेका थिए ।
त्यो अफिसमा काइलले अर्को मानिस जसले स्टकको कारोबार गर्द थे उ संग धेरै कुरा सिक्ने अवसर प्राप्त गरे । तिनै मानिस बाट काइलले स्टकको बारेमा सिके ।
काइल कहिले पनि लगानीकर्ता हुन सकेका थिएनन्। वास्तवमा यस भन्दा पहिले उनले आफ्नो जीवनमा कहिल्यै शेयरको स्वामित्व लिएको थिएन। उनलाई व्यापारको बारेमा केहि पनि थाहा थिएन। भाग्य को एक स्ट्रोक द्वारा, काइल जेसन बान्ड द्वारा एक वेबिनार पत्ता लगाए कि3सरल शेयर ट्रेडिंग रणनीति जो कोहीले प्रयोग गर्न सक्थे (ओभरस्ल्ड, निरन्तरता र ब्रेकआउट पैटर्न संग शेयर लक्षित)।
रणनीतिहरू साँच्चिकै सरल थिए, ”काइलले एक अन्तर्वार्तामा बताए। “उनीहरूले कुनै गणितिय वा केहि पनि समावेश गरेन … यो सबै ले इन्टरनेटमा नि: शुल्क जानकारीको पहुँच ले नै गर्यो।”
वेबिनार हेरेपछि काइलले यसको लागि जाने निर्णय गरे। उनले आफ्नो सबै पैसा बजारमा लगानी गरे किनकि उनको नाफाले उनको घाटा नाघ्यो।
एकै दिनमा, उनले आफ्नो व्यापार खाता बढेको देख्न पाए । जसै ब्यापार उनको लागि स्वाभाविक हुँदै गयो र उनको सीपहरू बढ्यो, नाफा अझ ठूलो भयो।
काइलको यथार्थ कुरा पत्ता लगाउदा अचम्मै लाग्छ । काइलको कर फिर्ताको र ट्रेडि खाता नाफा देखेपछि हामी खबर गर्न चकित हुन्छौं कि उनले वास्तवमा उनले जेसनको सेवामा भर्ना भएको $ ८ लाख ३८ हजार डलर नाफा कमायो र उनले सिकाएको पाठको महारत हासिल गर्‍यो। आफ्नै निजि बिचार र सिपको सहि सदुपयोग गरेर ।
केवल छोटो अवधिमा काइलले आफ्नो मूल लगानी $ १५ हजार डलरबाट पूरै २.८ मिलियन डलरमा परिणत गर्न सफल भए , र जेसन बान्डबाट पोर्श जिते, जसले आफ्ना तीन विद्यार्थीहरूको लागि पोर्शको लागि तिर्ने प्रतिज्ञा गरेका थिए भने करोडौं डलर नाफा पार गरे । काइल अब RasingBull.com संग काम गर्दै छन् ।
जेसन ब्रान्डको स्टक ट्रेडिंग वेबिनार हेर्नका लागि पूर्ण स्वतन्त्रता छ। यसलाई कुनै पनि समयमा हटाउन सकिन्छ किनभने ब्रान्डको स्तर ब्रान्डको सुरुमा सोचेभन्दा धेरै उच्च छ ।
हामीले यो शब्द पाएका छौं कि यसलाई कुनै पनि समयमा हटाउन सकिन्छ किनभने ब्यान्डको स्तर बांडको सुरुमा सोचेभन्दा धेरै उच्च छ । अखिर गर्दा कुनै कुरा पनि असम्भव रहेन छ भन्ने कुराको प्रमाणित काइलले गरेका छन् । आफ्नो अध्यन र काम संगै बढाएका उनले ४ बर्षको छोटो अबधिमा आफुलाइ करोड पति बनाउन सफल सफल भएको कथा थोरै देख्न सकिन्छ ।
कसरी भविष्यमा यात्रीहरूलाई सुरक्षित राख्न सकिन्छ भन्ने उपायहरू
२०७७ भाद्र २, मंगलवार ०९:४४
एजेन्सी । अधिकांश मुख्य एयरलाइन्समा मास्क अनिवार्य भए पनि, र सरसफाइ र सरसफाइ अभ्यास बढाइएको छ भने पनि, डिजाइनरहरू सुरक्षित हवाई यात्रा सुनिश्चित गर्न आफ्नै तरिका लिएर आएका छन् । डिजाईन फर्म टीगबाट एक थ्रीडी-प्रिन्ट गरिएको उत्पादनले यात्रुको सास फेर्नका लागि सिट माथिको भेन्ट्समा संलग्न गर्दछ, जसको कम्पनीको वेबसाइटमा वर्णन […]
२०७८ श्रावण ८, शुक्रबार ०७:४०
कर छलिको आरोपमा भारतका दुई ठूलो सञ्चारगृहमा सरकारको छापा
२०७८ श्रावण १८, सोमबार १८:४०
नयाँ श्रम कानून कार्यन्वयनमा आए सातामा ३ विदा
२०७७ भाद्र ९, मंगलवार १७:२५
म #महिला हो, कठिन भयो भनेर पछि पर्नु हुँदैन |
२०७८ श्रावण ८, शुक्रबार ०७:३१
२०७७ मंसिर ४, बिहीबार १८:३५
‘मालिङ्गो’ गीतमा स्मीता दाहाल र राजेश हमालको जोडी (भिडिओसहित) हेर्नुहोस
२०७७ पुष २१, मंगलवार १८:१९
दलित महिला संघ (फेडो) को संस्थागत क्षमता विश्लेषण